Hon. Edmund Bartlett na -eme Ime Anwansi maka ndị Jamaica na Njem Nleta Ụwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Hon. Edmund Bartlett na -eme Ime Anwansi maka ndị Jamaica na Njem Nleta Ụwa
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ gbasara Jamaica • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
"Ị mere ya!" kwesịrị ịbụ nzaghachi Minista njem nlegharị anya nke Jamaica Hon. Edmund Bartlett. N'agbanyeghị ịdọ aka ná ntị njem siri ike na ndekọ ntiwapụ COVID na ahịa isi iyi Jamaica - United States - mba Island jisiri ike dekọọ ọnụọgụ ndị njem dị elu. Njem a na -ejikwa nke ọma ma dịkwa nchebe yana ụlọ ọrụ njem nlegharị anya yiri ka ọ na -arụ ọrụ nke ọma, n'agbanyeghị ọnọdụ agaghị ekwe omume.
Jamaica enwetala ijeri US $ 1.2 site na nde ndị ọbịa bịara nde 1.1 kemgbe mmalite afọ.
Dị ka UNWTO si kwuo, Jamaica natara ihe dị ka nde mmadụ 4.23 ndị ọbịa mba ofesi bịara na 2019, na naanị 800,000 na 2020 niile.
Nde ndị ọbịa nde 1.1 n'ime ọnwa itoolu nke afọ a bụ ọmarịcha ihe ịga nke ọma, maliteghachi njem na njem na Jamaica n'oge oge agaghị ekwe omume.
Minista njem nlegharị anya, Hon. Edmund Bartlett, na Ọrụ Ozi Jamaica, "Think Tank," n'isi ụlọ ọrụ na Kingston na Tuesday.
“Ọrụ ahụ na -ahụ ịrị elu pasent 22 na ego anyị na -enweta, ihe ruru nde US $ 212, ndị mbata anyị sitere na 800,000 afọ gara aga ruo nde 1.1 n'afọ a,” ka o kwuru.
O kwuru na ọtụtụ n'ime ndị bịara agwaetiti ahụ sitere na United States (US), ebe ahịa ndị ọzọ dị ka United Kingdom (UK) na Canada nwere mgbochi coronavirus (COVID-19) dị iche iche, nke gbochiri ndị mmadụ ime njem.
Minista Bartlett rụtụrụ aka na site na mmụba nke ego na ndị mbata ndị ọbịa, ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ dị mkpa na mgbake mba ahụ mgbe oria ojoo gasịrị.
Ọ sịrị, "Anyị weghachitere ihe karịrị ndị ọrụ 60,000 n'ọrụ ha, nke furu efu n'ihi ọrịa na -efe efe,"
O kwuru na ụlọ ọrụ ahụ 'nwere ezi uche' na usoro mgbake COVID-19 ma lekwasị anya na nkwado "dịka isi ihe na-aga n'ihu."
Minista Bartlett kwuru, "N'ihi nke a, ọ nweghị ụlọ ọrụ ka mma iji bulie ego maka Jamaica, weghachi ọrụ na iwepụta ohere ọhụrụ na obodo n'ofe obodo karịa ụlọ ọrụ njem."